Ny sasany amin'ireo add-ons dia mangarahara na maitso (tsy misy soratra). Inona no tokony hataoko ? (FSX SP2 / Acceleration)
Zavatra tena ilaina, raha toa ianao ka manana add-on iray izay noforonina ho an'ny FS3 modely 2004D saingy ampiasaina amin'ny FSX SP2 (antsoina ihany koa hoe Port Over), dia ny mamafa ny Preview DirectX 10 amin'ny fanovana FSX. Raha ny marina, ny adds FS2004 dia tsy mifanaraka amin'ny DirectX 10.
Example 1: ny ampahany ny fiaramanidina tsy hita.
Example 2: ny elatry ny fiaramanidina, raha ny tsy hita maso.
Example 3: Ny fiaramanidina no tanteraka volondavenona, tsy mihasimba.
Ny vahaolana: Hamono DirectX 10 topi-maso.